Kylian Mbappe Oo Guri Ka Raadsanaya Magaalada Madrid & Xogo Cusub Oo Soo Baxay - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaKylian Mbappe Oo Guri Ka Raadsanaya Magaalada Madrid & Xogo Cusub Oo Soo Baxay
April 20, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe ayaa guri ka raadsanaya magaalada Madrid ee caasimadda waddanka Spain, xilli sannad kali ahi ka hadhsan yahay qandaraaskiisa PSG, walina uu diiddan yahay in uu heshiis cusub saxeexo.
Heshiiska uu Kylian Mbappe kula jiro PSG ayaa waxa uu ku eg yahay xagaaga 2022, waxaanay wararka soo baxayaa sheegayaan in uu guri ka raadsanayo magaalada Madrid, halkaas oo uu doonayo in uu u guuro xagaaga soo socda amaba dhamaadka xilli ciyaareedka dambe.
22 jirkan oo lala xidhiidhinayo kooxaha waaweyn ee Yurub, gaar ahaan Real Madrid oo uu doonayo in uu ka hoos ciyaaro Zinedine Zidane ayaa waxa sida ay kusoo warramayaan warbaahinta Goal, waxa uu dirsaday dillaaliin guri uga raadiya magaalada Madrid.
Mid ka mid ah dadka u shaqeeya Kylian Mbappe ayaa la sheegay in uu ku sugan yahay magaalada Madrid oo uu ka shaqaynayo sidii uu u heli lahaa guri ku habboon oo uu dego laacibkani.
Warka ayaa waxa uu intaa ku daray, in xiddigani uu kooxdiisa kula joogo jawi deggan oo diidmo na ku jirto oo uu kaga gaws-adaygayo in uu heshiis cusub u saxeexo, taas oo ka dhigan siyaasad uu ciyaarayo oo ah in uu ku qasbo in ay iibiyaan xagaaga.
PSG ayaa marar badan ku celcelisay in aanay iibin doonin Mbappe, laakiin ciyaartoyga ayaa waxa uu rumaysan yahay in kooxdu ku qasban tahay in xagaagan ay ka iibiso Real Madrid, haddii kalena uu si xor ah uga tegi doono June 2022 oo uu si bilaash ah ugu wareegi doono kooxda uu doonayo.
Xiddigan reer France ayaa dhawr jeerr oo uu warbaahinta hor yimid ka gaabsaday in uu caddeeyo mustaqbalkiisa, waxaase waraysi uu dhowaan bixiyey uu ku sheegay in dhibaato ay ku hayso ka ciyaarista gudaha Faransiisku, isla markaana uu la kulmayo culays ka badan ciyaaryahannada kale ee xulka qaranka ay u wada ciyaaraan ee dibedda dalka ka dheesha.
Kylian Mbappe ayaa si fiican ugu hadla luuqadda Spain oo uu hore u bartay, waxaana uu rumaysan yahay in taasi ka caawin doonto inuu si degdeg ah ula qabsado nolosha Spain.